DAAWO-Qoorqoor oo qori qaatay dagaalna ku dhawaaqay sheegayna inay Puntland difaac u yihiin.
April 7, 2021 Xuseen 3
Puntlandtimes (DHUUSAMAREEB)-Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo wafti uu hoggaaminayo ayaa booqasho ku tegey furimaha dagaalka Galgaduud ee ay ku sugan yihiin ciidanka difaaca maamulkaasi.
Madaxweyne Qoorqoor oo gaarey jiidaha dagaalka ayaa waxa uu warbixino ka dhegaysaty saraakiisha ciidanka difaaca maamulka Galmudug, isagoona ku bogaadiyey shaqada ay hayaan iyo dagaalka ay kula jiraan kooxda Alshabaab.
Waxa uu sheegay inay ururka Alshabaab ka hortaagan yihiin deegaamada Puntland ayna tahay waajibaad saaran oo ay ku ilaalinayaan jiritaanka iyo ammaanka walaalohood ayna sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah ururkaasi Alshabaab.
Waa hanjabaad Puntland Ku socota Farmaajo ayaa yiri tag jiida oo waxaad tiraahdaa Puntland ayaan ilaalinaa!!!
Oo maad Galmudug ka xoraysid Al-shabaab intaadan Puntland difaacin???
Hanjabaadahan yaan dhayal loo qaadan waa hanjabaad dadban oo Puntland la rabo in Al-shabaab lagu weeraro ileen waa koox marba shaar xirtee.
Farmaajo ayaa argagixisada Ku cabsiin Puntland oo lacag u xawilin.
Puntland ayaan difaac u ahey wax aqli gal ah maha adigoo dgulkagii inta badan laheysto!Dhusamareb ayey mar walba weeraran maad iska celisan?Puntland hal tuulo maka heystan kuwan afka dubta ? waa maya .waxu dhahey cidna nama tanuleyso anago oh cidankan inu yahey kii somalia ayu leyahay waa galmudug kkkkkkk Farmajo waxuu cidan geyey mushaharna kavixaya dhaman mamuöada kale marka laga reebo Puntland iyo Jubland !Timir lafba ku jidha waxaka qaylisinaya labadaas manul wa wax weyn !Dowlad ayan wadagna iyo waxba idinma ogilin mamuladina wa bur butikerna waxas aqli matahay yaab!!
Puntland Shabaab ma joogaan laakiin xabsiyada Puntland maxaabiista bay kala baxaan, Galgalana ha sheegin oo lagumaba arko. Sow ma aha is hafid nooca ugu weyn qoraalada kore marka loo eego waa caqli intaa ah.